Mid ka mid ah daafacyada Arsenal oo iska diiday heshiis kordhin cusub, kuna wargeliyey Gunners inuu doonayo inuu tago – Gool FM
(London) 27 Okt 2020. Daafaca Kooxda kubadda cagta Arsenal ee Shkodran Mustafi ayaa la soo warinayaa inuu u sheegay kooxdiisa Gunners inuu doonayo inuu tago kaddib markii uu iska diiday heshiis kordhin cusub intii lagu guda jiray xagaaga.
28-sano jirkaan ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu ku eg yahay sanadka soo socda, taasoo la micno ah inuu xor u noqon doono inuu wada xaajood la galo kooxaha ajaaniibta ah ee doonaya saxiixiisa laga bilaabo bisha Janaayo.
Majaladda football.london ayaa warinaysa in Mustafi loo soo bandhigay qandaraas kordhin intii lagu guda jiray suuqii dhowaa, laakiin uu diiday, isla markaana uu ku wargaliyay Gunners inuu doonayo inuu baxo marka qandaraaskiisa haatan uu dhammaado.
Daafacan dhexe ayaa loo maleynayaa inuu door-bidayo u dhaqaaqista horyaalka Serie A si uu ugu dhawaado xaaskiisa reer Albanian iyo qoyska reer Swiss ee ku nool Switzerland.
Mustafi ayaa kaliya hal kulan u saftay Arsenal ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, isagoo ka soo laabtay dhaawac jilibka ah qeybtii labaad ee kulankii Axadii ay guuldarrada 1-0 kala kulmeen Leicester City.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa horay ula soo shaqeeyay kooxda Macallin Mikel Arteta oo uu ka hoos ciyaarayay, isagoo ku bilawday 15 ka mid ah 17 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkii hore ka hor inta uusan dhaawac jilibka ahi soo gaarin.
Mustafi ayaa Arsenal ku soo biiray sanadkii 2016-kii, waxaana ay kula soo wareegtay lacag lagu qiyaasayo 35 milyan oo gini, isagoo kooxda u saftay 143 kulan.
Ariedo Braida: "Barcelona waxa ay ii sheegtay in Erling Haaland uusan lahayn tayadii uu kaga ciyaari lahaa Camp Nou"